Umnotho wemakethe: Kuyini, izinzuzo nezinkinga kanye nesibonelo | Ezezimali Zomnotho
UClaudi Casal | 29/06/2021 16:00 | Umnotho jikelele
Cishe usuvele wezwa ngemakethe noma umnotho wemakethe yamahhala. Noma iningi labantu lihlobanisa nomnotho ngokuzenzekelayo, bambalwa kakhulu abayiqonda ngempela incazelo yayo. Uyini ngempela umnotho wemakethe? Isebenza kanjani? Lusho ukuthini lolu hlelo?
Inhloso yalesi sihloko ukucacisa konke lokhu kungabaza okuhambisana nomnotho wezimakethe. Sizochaza ukuthi kuyini, ubuhle kanye nobubi bayo kanye nesibonelo sokuqonda okungcono.
1 Uyini umnotho wemakethe?
2 Izinzuzo nezinkinga zomnotho wemakethe
3 Isibonelo somnotho wemakethe
Uyini umnotho wemakethe?
Lapho sikhuluma ngomnotho wezimakethe, noma imakethe yamahhala, sibhekisa enhlanganweni nasethi yezici ezahlukahlukene zokukhiqiza nokusetshenziswa ngumphakathi. Lokhu kuzungeze imithetho edumile yokuphakelwa kanye nokufunwa. Ngokuyisisekelo imodeli ekhululekile evikelwe yilabo abakholelwa ukuthi uMbuso akufanele ungenelele, noma ukwenze ngezinga elincane, ezindabeni zezomnotho zanoma yiliphi izwe.
Ngakolunye uhlangothi, kunomnotho oqondisiwe, lapho uMbuso ubeka khona umnotho ngenhloso yokufeza amaphrojekthi athile ezenhlalo, ezepolitiki kanye nemibono. Kodwa-ke, akukho kuvunyelwana ngokuthi imingcele ilele kuphi phakathi komnotho wokuyala nomnotho wezimakethe. Kungaphezulu, Igama elithi 'umnotho wezimakethe ezixubekile' seliqalile ukusetshenziselwa ukubhekisa endaweni ephakathi nendawo.
Yini izimakethe zezezimali
Ngokunjalo, kunezinkulumompikiswano mayelana nokuthi yiziphi izici zomnotho okufanele zishiyelwe imakethe yamahhala futhi okufanele zilungiswe. Noma kunjalo, umnotho wezimakethe ukhona emhlabeni wonke oyingxenye yobungxiwankulu, yebo, kwezinye izindawo ngezinga elikhulu futhi kwezinye ngezinga elincane.
Ngaphakathi kohlelo lomnotho wezimakethe Kunezinhlobo ezimbili zomncintiswano ozozigqamisa:
Umncintiswano ophelele: Lolu hlobo lokuncintisana lukhona kuphela esimweni esihle, okwamanje. Kulokhu, bekungalawulwa kuphela futhi kuphela yimithetho yokuphakela kanye nokufunwayo. Lokhu kuvame ukuzuza ukuzinza nokulingana.
Umncintiswano ongaphelele: Ngakolunye uhlangothi, ukuncintisana okungaphelele kwenzeka lapho kukhona ukungenelela emnothweni ngezinto zangaphandle. Lokhu kungaba, isibonelo, uxhaso, ukuvikelwa kombuso, ukubuswa wedwa, ukuncintisana okungafanele phakathi kwezinkampani nemithethonqubo.
Izinzuzo nezinkinga zomnotho wemakethe
Njengoba bekulindelekile, uhlelo lomnotho wezimakethe lunezinzuzo nokubi, cishe cishe yonke into. Okulandelayo sizobhala izinzuzo lolu hlobo lomnotho olungasiletha zona:
Amanani entengo yokugcina kubathengi ngenxa yenani elikhulu labancintisana.
Ukuhlukahluka okuningi ngokuya kokuphakelayo. Ngenxa yalokho, umthengi unezinketho eziningi ongakhetha kuzo lapho efuna ukuthenga okuthile.
Ngokuvamile, osomabhizinisi bavame ukukhuthaza izinhlelo futhi bazifaka engcupheni. Kulesi sibambo ukuhamba kwezomnotho kugcinwa.
Ngokombono wabathile bezomnotho, umphakathi uzoba nenkululeko ethe xaxa kwezepolitiki nezomphakathi uma ngabe benikezwa inkululeko yezomnotho.
Yize la maphuzu ezwakala emuhle, futhi kufanele ukhumbule ukuthi umnotho wemakethe ungaba nokubi okuthile Yini okufanele siyicabangele:
Imikhakha engenamali eningi ingakhishwa inyumbazane, ngoba labo abaswele imali ngeke bakwazi ukungena kulo mdlalo wezomnotho.
Ngoba imali enkulu izogcina ijikeleza phakathi kwamaqembu omphakathi afanayo, bekungeke kube khona ukuhamba ngezigaba. Lokho kusho ukuthi: Ompofu angahlala empofu kanti ocebile yena uzohlala ecebile.
Kukhona ukuthambekela okuthile kokuncintisana okungafanele nokuzibusa. Kodwa-ke, la macala ngokuvamile ahlobene nokungenelela koMbuso.
Umnotho wezimakethe ungalimaza imvelo. Ngeshwa, lesi sici ngokuvamile asithathwa njengesici esifanele emibonweni yezomnotho yenkululeko.
Isibonelo somnotho wemakethe
Ukuqonda kangcono uhlelo lomnotho wezimakethe, sizoluchaza ngesibonelo. Ukusebenza kwalolu hlelo lwezomnotho kungamelwa ngomehluko wamanani ahlobene nobuchwepheshe lapho usanda kuthuthukiswa. Ngesikhathi lapho kuvela inqubekela phambili entsha yezobuchwepheshe, amanani ayo ngokuvamile aphezulu kakhulu ukuthi kube ngabantu abaphezulu kuphela abakwazi ukuyifinyelela. Ngakho-ke, ukunikezwa okukhona kunqunyelwe. Noma kunjalo, Njengoba isidingo salobu buchwepheshe obusha sikhula, izimbangi ezintsha nazo ziyavela, enikeza izinketho zokuthenga ezingaphezulu kubathengi. Ngenxa yale nqubo, intengo ivame ukwehla, okwenza kube nokwanda kokusetshenziswa kwayo.
Sengiphetha, singasho ukuthi umnotho wezimakethe, njengazo zonke ezinye izinhlelo zezomnotho ezikhona, unezinzuzo ezibalulekile nezinkinga okufanele azicabangele. Yize kuyisistimu ethandwa kakhulu phakathi kwabaningi bezomnotho, kusesekude kakhulu ukusuka esifundazweni sase-utopia abantu abaningi abasifunayo ngamandla abo onke.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Umnotho wemakethe